MAREEGTA ARRIMAHA CAAFIMAADKA » Dhakhtar cusub oo carruurta lagu daaweeyo ayaa maanta laga furay magaalada Hargeysa
Dhakhtar cusub oo carruurta lagu daaweeyo ayaa maanta laga furay magaalada Hargeysa
Munaasabad balaadhan oo lagu furayey qayb ka mid ah dhismaha Cisbitaalka caruurta ee Maxamed Aadan Sheekh ee Magaalada hargaysa ayaa manta lagu qabtay xarunta cisbitaalka Jajabka ee caasimadda.
Mas?uuliyiin ay ka mid yahiin Gudoomiyaha Golah wakiilada Md cabdiraxmaan Maxamed cabdilaahi, Marwada Madaxweynaha Somaliland marwo Aamina xaaji Maxamed Jirde (A Weris) wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo ku xigeenkiisa iyo wasiirka wasaaradda qorshaynta Dr sacad Cali shire iyo mas?uuliyiin kale ayaa ka qayb gashay munaasabadaasi lagu furayey qaybta caruurta ee Cisbitaalka Maxamed aden Sheekh ee Magaalada hargaysa.
Dr maxamed Cabdi Yuuusf Gabboose oo munaasabadaas ka hadlaya yaa sheegay in Dr Maxamed aadan sheikh aalle ha u naxariistee ay u suuro gashay inuu Somaliland ka dhiso dhakhtarkan isagoo gacan ka helayey macalimiinta Jaamacadda Turino ee Dalka talyaaniga.
Gudoomiyaha Golaha wakiilada Cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi, Wasiirka wasaaradda caafimaadka Md Xuseen Muxumud maxamud (X Xoog), Marwo aamina Xaaji Maxamed Jirde oo munaasabadaas ka hadlay ayaa dhamaantood uga mahadceliyey cid kasta oo gacan ka gaysatay dhismaha cisbitaalka.
Dhakhaatiir talyaani ah oo munaasabadda goobjoog kaahaa ayaa ballanqaaday in shacabka iyo dawladda talyaaniguba sii wadi doonaan taagerada lama huraanka ah ee uu cisbitaalku u baahan yahay.
Link-kan hoose ka daawo warbixin iyoi sawiro